नयाँशक्तिका नेताहरुको बाबुरामलाई दवाव : नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरौं ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नयाँशक्तिका नेताहरुको बाबुरामलाई दवाव : नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरौं !
नयाँशक्तिका नेताहरुको बाबुरामलाई दवाव : नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरौं !	‘एकताको निर्णय नगरे अलग ढंगले सोच्ने’
पुस २० गते, २०७४ - ०९:३०
पोखरा । पोखरामा जारी नयाँ शक्तिको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
पुस १७ गतेबाट सुरु भएको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले वाम गठबन्धनबाट बाहिरने निर्णय गलत भएको धारणा समेत राखेका छन् ।
पहिलो चरणको चुनाव लगत्तै केन्द्रीय सचिवालय सदस्य डा। जनकराज शाहले कैलाली पुगेर वाम गठबन्धसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पहिलो चरणमा मात्रै काँग्रेस तालमेल भएको भन्दै नयाँ शक्तिका सबै नेता कार्यकताहरुलाई माओवादी केन्द्रलाई मतदान गर्न आह्वान समेत गरेका थिए ।
पुस २० गते, २०७४ - ०९:३० मा प्रकाशित